လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးတွေအများကြီး ရခဲ့ရတဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ "Women of Tomorrow-II" - For her Myanmar
Speakers တွေ ပြောလို့ပြီးသွားမှာတောင် စိုးရိမ်မိတယ်!!
ယောင်းတို့ရေ… ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့က Parkroyal Hotel မှာ မင်မင်တို့ For Her Myanmar က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Women of Tomorrow- II ပွဲလေးကို တက်ဖြစ်ကြလားဟင်? တက်ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို အမြတ်ထွက်သွားတဲ့ ပွဲပါပဲနော်… ပွဲတက်ရောက်ပေးခဲ့တဲ့ ယောင်းယောင်းတွေ၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ Guest Speakers တွေကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ အရင်ဆုံး ပြောပါရစေ။ နောက်ပြီး Gift Bag Sponsor အဖြစ် ပါဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ Yoshi milk drink, Fair & Lovely, La Source Spa, Supradyn နဲ့ Vitara တို့ကိုလည်း အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မိပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောပါရစေရှင်…
ဒီ Women of Tomorrow – IIပွဲမှာဆိုရင် Myanmar Women in International Work Environment ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလေး တစ်ခုကို လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်… ဒီ Panel Discussion မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မော်ဒယ်လ်မိခင်ကြီးလို့ တင်စားကြတဲ့ တီချယ် တင်မိုးလွင်၊မ Laura Cho(Career Coach ) နဲ့ မ Arabelle Yee (International Speaker, Clinical Psychotherapist) တို့က သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်အောင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုတွေ ကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတာလေးတွေ မျှဝေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော့ ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေထဲက သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ကိုယ်အဖြေရှာမရဖြစ်နေတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးမြန်းပြီး Speakers တွေက ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
Related Article >>> လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေ သိထားရမယ့် အချက်များ
ဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မင်မင် သဘောအကျဆုံးကတော့ ကိုယ်လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အရာဟာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းပါပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ မ Arabelle Yee ပြောပြသွားတဲ့ အကြောင်းလေး တစ်ခုကို ယောင်းတို့ကို ဖောက်သည်ချချင်တယ်ရှင်… ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့…
ပုံပြင်လေးရဲ့ နာမည်က “Hero’s Journey” တဲ့…ချုံ့ပြောရရင်တော့…. ရွာတစ်ရွာမှာ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒီလူက တစ်ရက်မှာတော့ ရွာက ပုံမှန်လုပ်နေကျ အလုပ်တွေမဟုတ်တဲ့ တခြား အသစ်အဆန်း တစ်ခုခုကို လုပ်မယ်လို့ ကြံစည်ပြီး ရွာက ထွက်ဖို့ ပြင်ပါသတဲ့.. ဒီအခါမှာ ပထမဆုံး သူ့ကို ချစ်တဲ့ မိသားစုက တားတာပေါ့.. “သား..မင်းဟာ ဟုတ်ရော ဟုတ်ပါ့မလား.. ဖြစ်ပါ့မလား… မသေချာတာကြီးကို မလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့ကွာ… သေချာတာကိုပဲ လုပ်ကြရအောင်.. အမေတို့၊ အဖေတို့နဲ့ အတူတူ ဒီလိုပဲ နေနေလည်း ရတာပဲလေ… ဘာဆက်ဖြစ်မယ်မှန်း မသိတာကြီးကို မလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့လား” ဆိုပြီးပေါ့..
မဟုတ်ဘူး.. မဖြစ်မနေ သွားမယ်ဆိုပြီး ရွာက ထွက်လာတော့ ရွာက လူတွေက နှာခေါင်းရှုံ့ကြတာပေါ့… “ဟိုကောင်လေ.. ဘာမှန်းမသိတဲ့နေရာကို ဘာလုပ်ဖို့ဆိုလား သွားတယ်ကွ.. ကြည့်စမ်းပါဦး.. အပျက်ပျက်နဲ့ ပြန်လာဦးမယ် မြင်ယောင်နေသေးတယ်.. သူများထက်ထူး အရူးလုပ်ချင်တာကိုး… ဖြစ်ထွန်းလာမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူးကွာ.. အချိန်တန် ဒီကို ဒီလိုပဲ ပြန်လာရမှာပဲ” ဆိုပြီးတော့လေ..
ဟော .. လမ်းမှာ အခက်အခဲတွေ တွေ့ပြန်တော့ ထူမယ့်လက်တွေ တွေ့သလို မသိချင်ယောင်ဆောင်တဲ့လူတွေ၊ တစ်ရွာတည်းသားချင်း ကိုယ် မလဲလဲအောင် ဒုက္ခမရောက်ရောက်အောင် လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ပြန်ရောတဲ့… ဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတဲ့နောက် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ အိမ်လည်း ပြန်လာရော ဟော… ရွာက အရင် သူ့ကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကို ကြိုဆိုကြရောတဲ့….
Related Article >>> အလုပ်နဲ့ဘဝ အချိုးကျစေဖို့ မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းချက်(၃) ချက်
ဒါဟာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပေမဲ့ မင်မင်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဖြစ်တွေပါပဲ.. နယ်ကလာတဲ့ ယောင်းလေးတွေဆို ပိုခံစားမိမယ်… နောက်ပြီး မင်မင်တို့တွေ ကိုယ် လုပ်နေကျ အလုပ်ခွင်တွေထဲမှာ သြော်.. ဒါလည်း ငါ့အတွက် အဆင်ပြေနေတာပဲလေဆိုပြီး မှိန်းနေရင်း တကယ့်တကယ် ဒီအလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်ချင်လား၊ မလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတာ တွေးဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ… အိပ်နေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ၊ တွေးနေရင်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချန်ထားရစ်ခဲ့လို့ဖြစ်စေ၊ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာ ရုတ်တရက် “သြော်.. ငါလုပ်ချင်တာ ဒါပါလား” ဆိုတဲ့ အသိမျိုး ရလာတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ကိုယ့်တစ်သက်တာရဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့…
အဲဒီလိုမျိုး Awakening (အလင်းပေါက်) ရလာတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ် လက်ရှိလုပ်နေဆဲ ကိုယ်မပျော်တဲ့ အလုပ်ကို ဆက်လုပ်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို ပြောင်းလုပ်မှာလား? တကယ်ကို ရွေးချယ်ရခက်ခဲပြီး ဆုံးဖြတ်ရကြပ်တည်းတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ အဲဒီလို အချိန်မှာ ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကို သေချာမေးပါ။ စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝနောက်ဆုံး နေဝင်ချိန်ဆိုတာကို အရင်တွေးကြည့်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်က ဟာ..သူက သူ့ဘဝမှာ သူဖြစ်ချင်တာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးကြိုးစား ရင်ဆိုင်သွားခဲ့တာလေ ဆိုတာမျိုး ကြုံဖူးချင်လား? ဒါမှမဟုတ် ဒီတိုင်းလေးပဲ ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေး ဖြတ်သန်းချင်တာလား? နောက်ဆုံး အဆုံးသတ် ဘာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲလေ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
ယောင်းတို့ဆိုရင် ဘာတွေ ရွေးချယ်ကြမှာလဲ?
Speakers တှေ ပွောလို့ပွီးသှားမှာတောငျ စိုးရိမျမိတယျ!!
ယောငျးတို့ရေ… ဇှနျလ (၃၀) ရကျနကေ့ Parkroyal Hotel မှာ မငျမငျတို့ For Her Myanmar က ကငျြးပခဲ့တဲ့ Women of Tomorrow- II ပှဲလေးကို တကျဖွဈကွလားဟငျ? တကျဖွဈတဲ့သူတှအေတှကျတော့ တကယျကို အမွတျထှကျသှားတဲ့ ပှဲပါပဲနျော… ပှဲတကျရောကျပေးခဲ့တဲ့ ယောငျးယောငျးတှေ၊ ပါဝငျဆှေးနှေးပေးခဲ့ကွတဲ့ Guest Speakers တှကေို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျလို့ အရငျဆုံး ပွောပါရစေ။ နောကျပွီး Gift Bag Sponsor အဖွဈ ပါဝငျပေးခဲ့ကွတဲ့ Yoshi milk drink, Fair & Lovely, La Source Spa, Supradyn နဲ့ Vitara တို့ကိုလညျး အရမျးကို ကြေးဇူးတငျမိပါကွောငျး ထပျလောငျး ပွောပါရစရှေငျ…
ဒီ Women of Tomorrow – IIပှဲမှာဆိုရငျ Myanmar Women in International Work Environment ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျလေးနဲ့ ဆှေးနှေးပှဲလေး တဈခုကို လုပျပေးခဲ့တယျပေါ့နျော… ဒီ Panel Discussion မှာတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မျောဒယျလျမိခငျကွီးလို့ တငျစားကွတဲ့ တီခယျြ တငျမိုးလှငျ၊မ Laura Cho(Career Coach ) နဲ့ မ Arabelle Yee (International Speaker, Clinical Psychotherapist) တို့က သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျ အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ ယှဉျပွီး လုပျငနျးခှငျမှာ အောငျမွငျအောငျ ဘာတှေ ပွငျဆငျထားသငျ့တယျ၊ ဘယျလိုတှေ ကွိုးစားသငျ့တယျဆိုတာလေးတှေ မြှဝပေေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဆှေးနှေးပှဲအပွီးမှာတော့ ပှဲတကျရောကျလာတဲ့ ယောငျးယောငျးတှထေဲက သိခငျြတဲ့ မေးခှနျးတှေ၊ ကိုယျအဖွရှောမရဖွဈနတေဲ့ မေးခှနျးတှကေို မေးမွနျးပွီး Speakers တှကေ ဖွကွေားပေးခဲ့ပါတယျ။
Related Article >>> လုပျငနျးခှငျအတှငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နှောငျ့ယှကျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး မဖွဈမနေ သိထားရမယျ့ အခကျြမြား
ဒီ ဆှေးနှေးပှဲမှာ မငျမငျ သဘောအကဆြုံးကတော့ ကိုယျလကျရှိ လုပျနတေဲ့ အရာဟာ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့ အလုပျတဈခု မဟုတျခဲ့ဘူးဆိုရငျ ဘာဆကျလုပျမလဲဆိုတဲ့ အပိုငျးပါပဲ။ မှတျမှတျရရ မ Arabelle Yee ပွောပွသှားတဲ့ အကွောငျးလေး တဈခုကို ယောငျးတို့ကို ဖောကျသညျခခြငျြတယျရှငျ… ပုံပွငျလေး တဈပုဒျပဲ ဆိုကွပါစို့ရဲ့…
ပုံပွငျလေးရဲ့ နာမညျက “Hero’s Journey” တဲ့…ခြုံ့ပွောရရငျတော့…. ရှာတဈရှာမှာ လူတဈယောကျရှိပါတယျ။ ဒီလူက တဈရကျမှာတော့ ရှာက ပုံမှနျလုပျနကြေ အလုပျတှမေဟုတျတဲ့ တခွား အသဈအဆနျး တဈခုခုကို လုပျမယျလို့ ကွံစညျပွီး ရှာက ထှကျဖို့ ပွငျပါသတဲ့.. ဒီအခါမှာ ပထမဆုံး သူ့ကို ခဈြတဲ့ မိသားစုက တားတာပေါ့.. “သား..မငျးဟာ ဟုတျရော ဟုတျပါ့မလား.. ဖွဈပါ့မလား… မသခြောတာကွီးကို မလုပျခငျြစမျးပါနဲ့ကှာ… သခြောတာကိုပဲ လုပျကွရအောငျ.. အမတေို့၊ အဖတေို့နဲ့ အတူတူ ဒီလိုပဲ နနေလေညျး ရတာပဲလေ… ဘာဆကျဖွဈမယျမှနျး မသိတာကွီးကို မလုပျခငျြစမျးပါနဲ့လား” ဆိုပွီးပေါ့..
မဟုတျဘူး.. မဖွဈမနေ သှားမယျဆိုပွီး ရှာက ထှကျလာတော့ ရှာက လူတှကေ နှာခေါငျးရှုံ့ကွတာပေါ့… “ဟိုကောငျလေ.. ဘာမှနျးမသိတဲ့နရောကို ဘာလုပျဖို့ဆိုလား သှားတယျကှ.. ကွညျ့စမျးပါဦး.. အပကျြပကျြနဲ့ ပွနျလာဦးမယျ မွငျယောငျနသေေးတယျ.. သူမြားထကျထူး အရူးလုပျခငျြတာကိုး… ဖွဈထှနျးလာမှာလညျး မဟုတျပါဘူးကှာ.. အခြိနျတနျ ဒီကို ဒီလိုပဲ ပွနျလာရမှာပဲ” ဆိုပွီးတော့လေ..
ဟော .. လမျးမှာ အခကျအခဲတှေ တှပွေ့နျတော့ ထူမယျ့လကျတှေ တှသေ့လို မသိခငျြယောငျဆောငျတဲ့လူတှေ၊ တဈရှာတညျးသားခငျြး ကိုယျ မလဲလဲအောငျ ဒုက်ခမရောကျရောကျအောငျ လုပျတဲ့လူတှနေဲ့ တှပွေ့နျရောတဲ့… ဒါတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျပွီးတဲ့နောကျ အောငျမွငျမှုတှနေဲ့ အိမျလညျး ပွနျလာရော ဟော… ရှာက အရငျ သူ့ကို နှာခေါငျးရှုံ့ခဲ့တဲ့လူတှဟော ဝမျးပနျးတသာနဲ့ကို ကွိုဆိုကွရောတဲ့….
Related Article >>> အလုပျနဲ့ဘဝ အခြိုးကစြဖေို့ မဖွဈမနေ လိုကျနာရမယျ့ စညျးကမျးခကျြ(၃) ခကျြ
ဒါဟာ ပုံပွငျတဈပုဒျပမေဲ့ မငျမငျတို့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အဖွဈတှပေါပဲ.. နယျကလာတဲ့ ယောငျးလေးတှဆေို ပိုခံစားမိမယျ… နောကျပွီး မငျမငျတို့တှေ ကိုယျ လုပျနကြေ အလုပျခှငျတှထေဲမှာ သွျော.. ဒါလညျး ငါ့အတှကျ အဆငျပွနေတောပဲလဆေိုပွီး မှိနျးနရေငျး တကယျ့တကယျ ဒီအလုပျကို ကိုယျလုပျခငျြလား၊ မလုပျခငျြဘူးလားဆိုတာ တှေးဖို့ မနေ့တေတျပါတယျ။ တဈခါတလေ… အိပျနရေငျးနဲ့ပဲဖွဈစေ၊ တှေးနရေငျးနဲ့ဖွဈစေ၊ ကိုယျတနျဖိုးထားရတဲ့သူတဈယောကျက ကိုယျ့ကို ခနျြထားရဈခဲ့လို့ဖွဈစေ၊ တဈခြိနျမဟုတျ တဈခြိနျမှာ ရုတျတရကျ “သွျော.. ငါလုပျခငျြတာ ဒါပါလား” ဆိုတဲ့ အသိမြိုး ရလာတတျပါတယျ။ ဒီအခြိနျဟာ ကိုယျ့တဈသကျတာရဲ့ ဘယျအခြိနျမဆို ဖွဈနိုငျပါတယျတဲ့…
အဲဒီလိုမြိုး Awakening (အလငျးပေါကျ) ရလာတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ လကျရှိလုပျနဆေဲ ကိုယျမပြျောတဲ့ အလုပျကို ဆကျလုပျမှာလား၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျတကယျစိတျပါဝငျစားစှာ လုပျခငျြတဲ့ အလုပျကို ပွောငျးလုပျမှာလား? တကယျကို ရှေးခယျြရခကျခဲပွီး ဆုံးဖွတျရကွပျတညျးတဲ့ အခြိနျပါပဲ။ အဲဒီလို အခြိနျမှာ ကိုယျ့အတှငျးစိတျကို သခြောမေးပါ။ စဉျးစားတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝနောကျဆုံး နဝေငျခြိနျဆိုတာကို အရငျတှေးကွညျ့ပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ဂုဏျပုဒျက ဟာ..သူက သူ့ဘဝမှာ သူဖွဈခငျြတာတှကေို အတတျနိုငျဆုံး၊ အကောငျးဆုံးကွိုးစား ရငျဆိုငျသှားခဲ့တာလေ ဆိုတာမြိုး ကွုံဖူးခငျြလား? ဒါမှမဟုတျ ဒီတိုငျးလေးပဲ ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေး ဖွတျသနျးခငျြတာလား? နောကျဆုံး အဆုံးသတျ ဘာတှပေဲ ဖွဈဖွဈ အားလုံးဟာ ကိုယျ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုပဲလေ.. ဟုတျတယျဟုတျ?
ယောငျးတို့ဆိုရငျ ဘာတှေ ရှေးခယျြကွမှာလဲ?
Tags: #job #salary #Interview, Career, Event, For Her Myanmar Event, International, women of tomorrow